Isimada Puntland oo codsaday in heshiiskii Dekeda Boosaaso Banaanka lasoo dhigo – PuntlandNews24
Isimada Puntland oo codsaday in heshiiskii Dekeda Boosaaso Banaanka lasoo dhigo
Isimada Puntland oo maanta shir ku qabtay Hotel Gacayte ee magaaladda Bosaso ayaa soo bandhigay go’aan lagu xalinayo muranka ka dhashay kordhinta khidmadaha iyo cashuurta ee badeecooyinka ka soo dega dekeda Bosaso . Murankaasi ayaa hakad galiyay howlihii dekeda iyo guud ahaan ganacsiga magaaladda.
Shirka Waxaa khudbado ka jeediyay dhammaan isimadii ku saxiixnaa go;aanka, Waxaa kaloo shirka hadalo kooban ka jeediyay Masuuliyiinta ka socotay xukuumadda Puntland, Ganacsatadii, Nabadoonadii, Aqoonyahanadii iyo Haweenka, dhammaantoodna waxay soo dhaweeyay go’aanka isimadda.
Inkastoo shirka aan lagu faahfaahin Tariifada kumeel gaar ah ee ay isimadu soo saareen, balse sida Horseed Media ogaatay tariifadii hore ee dowladu soo saartay ayaa isbedel lagu sameeyay, waxaana isla maanta isimadu u dhiibeen Wasiirka Dekedaha Puntland iyo Wasiiru Dowlaha Maaliyadda. taasi oo la doonayo inay dhaqangaliyaan.
Go’aanka isimadu ka gaareen murankii dekeda ayaad la oran karaa wuxuu ahaa mid loo sameeyay isu soo dhawayn dhamaan dhinacyada muranku u dhexeeyey. ganacsatadada ayaa oggolaaday qaybo ka mid ah kordhinta tireefada canshuuraha iyo khidmadaha, taas oo ku xiran in aan dib loo kordhin karin mar danbe tan iyo inta laga dhisaayo dekadda Boosaaso.
Dekadda Boosaaso ayaa 30kii maalmood ee u danbeeyey marna xirneyd marna u shaqeyneysey si gaabis ah, in badan oo kamid ah doonyaha rakaabka u sidey Boosaaso ayaa taagan banaanka dekadda. waxaana la filayaa in galabta ilaa beri subax ay Dekeda ku soo xirtaan. dibna shaqadii dekeda u bilaabato.
Dekadda Bosaso waxaa la wareegtey shirkad laga lee yahay dalka Imaaraadka Carabta taas oo lagu magacaabo P&O Ports, waxaana heshiiskaasi dhigayaa in muddo 30 sano ah ay hayso maamulkeeda, sidoo kale heshiisku waxa uu dhigayaa 336 milyan oo dollar in ay dekadda ku maalgeliso, taas oo ay waajib ku tahay 136 milyan oo keliya halka 200 oo milyan ee soo hartey aysan ahayn khasab sida shirkaddu ku faafisey website-ka ay leedahay.
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo qado sharaf u sameeyay Xulka kubada Cagta Jubbaland ee ka qayb galaya Ciyaaraha Dowlad Goboleedyada dalka iyo Gobolka Banaadir